DAAWO:- Puntland oo xuduuda Sool u wareejisay Kontoroolka laga galo Garoowe + Somaliland oo ka naxday. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDAAWO:- Puntland oo xuduuda Sool u wareejisay Kontoroolka laga galo Garoowe + Somaliland oo ka naxday.
July 17, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 6
Maamulka Puntland ayaa Kaantaroolka Laga galo Magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowladda u soo raray Xuduudka kala qaybiya Gobollada Sool iyo Nugaal, waxaana arintaasi ka naxay Ciidammada Millateriga Somaliland ee kuxugan xuduuda gobolka Sool.
Saraakiil ka mid ah Ciidammada Somaliland oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Laascaanood ayaa ka digay Cawaaqib-xumo ka dhalan karta Kaantaroolka Garoowe ee la keenay Xuduudka Gobolka Sool iyo weliba dhul ballaadhsi ay Saraakiishu sheegeen in Puntland ka waddo deegaannada Bixin iyo Qol oo dhammaantood ka mid ah Gobolk Sool ee Somaliland sida saraakiishaan hadalka udhigeen.
Mid ka mid ah Saraakiisha la hadlay Saxaafadda ayaa isagoo arrimahaa ka hadlaya yidhi “Hartinimadu ma wax la isku dhacaa, waar joojiya dhul boobka aad ka waddaan Bixin iyo Qol. 3 Cisho gudahood waa in halkaa lagaga waantoobaa, nabadgalyadiina iyo naftiina ilaashada oo noo daaya Annaga.”
Sarkaalkan oo hadalkiisa sii wata ayaa ku hanjabay “Haddaydaan joojin, tallaabada aanu ka qaadno waxaad arki doontaan Garoowe oo Bisaduhu ku dhex meeraan…” waxaana uu intaasi kusii daray in ay diyaar yihiin Ciidankooda difaaca gobolka Sool.
Maamullada Puntland iyo Somaliland ayaa wada sheegata Mulkiyadda Dhuleed ee Gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, waxaana Kontoroolkaan Cusub ee loo raray xuduuda gobolka Sool uu umuuqdaa mid xukuumadda Deni ay ku doonayso in ay ku difaacdo amaanka Caasimadda oo aad ugu dhaw xuduuda ay la leedahay Somaliland.
shacabka pl waxa ee xalaashaa waxay goaansadeen in dhuunihante iyo dhukiisab loo hibeeyo idoor waa you dad xonimada rabamaaha waadad sharaftu uga fiiicantahay luqmada ay laqayan marka waa lasoo cayrinaayaa baarlamaanka 17 xildhibaan madaxdooda iyo isimadooda. Garoowe tuunsan dhulnakaagama baahna mudug ilaa Caluula beyleeyihiin . hadaad cid ka naxeyso dhuni hante oo ceeb iyo canbaara ee unax intakes reero derbigood fadhiya oo aan ayagu kala aqoon cadow iyo gacal reer madani cunaaaaaaaaaa adoonta 2019 dad adoonsi ku jiraaa xorityada markaad isaaq kazoo qaadato hadal
Habartii halkas nagu imaada waxey la kulmaysa gus xiidiido leh.🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Puntland shaaqo ficaan ayaad haysan. Nimankan iidoor iga mashquuliya sida hablahoda udabo maaro oo filimada wasmada ka duubo. Kkkkkkkkkkkkkkk
Ismaamulka beeleed ee Woqooyi Galbeed waxba kaga ma duwana ismaamullada kale ee iyagu na qaabkaas loo yagleeshay xilli uu dalku burbursanaa oo qabyaalad loogu kala faquuqmay. Marka xaqa iyo runta laga hadlo na ismaamulka Puntland waa mid laga unkay rabitaan iyo ikhtiyaar buuxa ee dhammaan beelaha Harti iyo tolweynaha kale ee geyiga la deggan ka soo go’ay.
Laakiin ismaamulka ‘Somaliland’ waa mid lagu taagay qori caaraddii ee ayna dhistay oo wali na ay maamusho jabhad hubeysnayd. Beesha Isaaq ayaa awal ku raacsanaa oo markii dambe na ku kala booday. Ma aha ismaamul dad rabitaankooda iyo ikhtiyaarkooda buuxa lagu yagleelay si kasta oo doorashooyin iyo aftiyo bug ah loogu maldahday. Waa ismaamul aan xalaal ahayn halka ismaamulka Puntland oo xalaal ku dhisan yahay.
Midda kale ee waaqiciga dhabta ah waafaqsani waxaa weeye in ay Puntland xadkan ku salaysiisay nidaam dawladeedkii hore ee gobollada dalka ka jiray oo wali sugan inta qaab dastuuri ah dib looga baddali doono. Sidaasi aawadeeda xadka ay Puntland adeegsatay waa mid rasmi dalka uga oo Puntland na waa ismaaamul rasmi u jira.
‘Somaliland’ oo aan ahayn ismaamul rasmi u jira maxaa Sool iyo Sanaag ka khuseeya? Xuduud isticmaar oo uu casrigeedii idlaaday wax jira ma aha ee qiilka sharciyeysan ee ay xuduudda ay sheegato ku salaysiin kartaa ina ayihii?
Markii noogu kaa danbeysay aad iyo aad ayaad uga niyad jabsaneyd Budhleyn. Anigu wax is badaley ma arkee ma dacartii qabyaada ee ku dhaansatay ayaa kugu soo kaakacdey? Kkkk
Say doontoba ha ahaatee soo noqod wanaagsan. Mar hadii bilaamagacyadii iyo caydii xaddhaafka aheyd hadheyso waa Alle mahadii.